Soomaalida Zambia oo si diirran u soo dhoweysey Siyaasi Cali C. Awaare+Sawiro – SBC
Soomaalida Zambia oo si diirran u soo dhoweysey Siyaasi Cali C. Awaare+Sawiro
Posted by editor on June 27, 2011 Comments
Siyaasiga Soomaaliyeed Md Cali Cabdi Awaare, oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda Puntland, isla markaasna sanadkii 2009-kii isu soo taagey tartankii doorashadii madaxtinimo ee Puntland, haatanna u taagan tartanka doorashada madaxtinimada Soomaaliya ayaa si diirran loogu soo dhoweeyey waddanka Zambia iyadoo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Zambia iyagoo wada jira ay si diirran ugu soo dhoweeyeen waddanka.
Cali Cabdi Awaare ayaa loo qabtay xaflado iyo munaasabado waaweyn oo ay ka soo qayb galeen ganacsatada Soomaaliyeed ee reer Zambia iyo weliba mas’uulyiinta Zambia oo ugu horreeyo wasiirka arrimaha dibadda ee Zambia Kabinda Pande, guddoomiyaha Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Zambia, Xasan Mataan, oo ku nuux-nuuxsaday sida Soomaalida Zambia ay u midaysan yihiin, hal aragtina uga leeyihiin arrimaha Soomaaliya, Suldaan Cali Baashi iyo Maxamed Siciid oo kamid ah ganacsatada waddanka.
Soomaalida Zambia ayaa Md Cali Cabdi Awaare ku ammaantay, aasaaskii dhismaha golayaasha deegaanka Puntland isagoo u dhisay 22 degmo, golayaal deegaan oo iska soo dhex doorta duqa iyo kuxigeenka degmo kasta iyo guud ahaan wax qabadkisii muuqdey ee uu muujiyey intii uu xilalka kala duwan ka soo hayey Puntland, iyadoo meelaha lagu soo dhoweeyey ay kamid yihiin, caasimadda Lusaka, magaalada labaad ee Ndola iyo Kitwe.
Kulamadaasi ayuu siyaasigu uga waramayey dadkii uu la kulmay xaaladaha kala duwan ee guud ahaan dalka gaar ahaan deegaanada Puntland, sida arimaha nabadgalyada, dhaqaalaha, siyaasada & arimaha bulshada, isagoo ugu baaqay dadka ka soo jeeda deegaanada Puntland ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka wadanka dhinaca nabadgalyada & arimaha bulshada.
Awaare waxaa kale oo uu ka warbixiyey xaaladaha Soomaalida ku dhaqan wadamada Yurub isagoo sheegay in safaradii uu ku soo marey wadamada UK, Finland, Norway, Sweden & Holand, isagoo sheegay in dadkaasi uu uga warbixiyey xaaladaha kala duwan ee dalka.
Maxamed Faarax Bille